/Blog/Ithala/Ngaba iMK-677 (Ibutamoren) isebenza kakuhle kulwakhiwo lwezihlunu? Uphengululo Olumnandi [ENTSHA]
ezaposwa ngomhla 09 / 29 / 2019 by 阿斯劳 bha liweyo Ithala.
I-AASraw ngumenzi wobungcali weMK677 powder (Ibutamoren).
Enye yeenzuzo eziphambili ze-mk 677 kukuphucula ukukhula kwemisipha kunye nokufumana kwakhona. Ukusukela ukuba ukongezwa kwe-mk 677 kunyusa i-IGF-1 kunye namanqanaba e-GH umsebenzisi anokubeka kubungakanani obukhulu ngokulula. Oku kuxhaswe luphando kunye nesayensi. Izifundo ezenziweyo zibonise ukonyuka okukhulu kubunzima be-mussle ngakumbi kubantu abanesiphene sokukhula kwehomoni kunye namadoda amadala ngakumbi iminyaka engama-60 nangaphezulu. Uninzi lophononongo lwe-mk 677 olusuka kubasebenzisi lukwacebisa ukuba eli chiza linesiphumo esihle kwisakhiwo sezicubu zomzimba.
Kwisifundo sophando lwenzululwazi olwenziwe kubantu abasibhozo bokuzila ukutya, u-Ibutamoren mk 677 wakwazi ukubuyisa ukubhuqwa kwezihlunu kunye nokulahleka kweprotein. Olunye uphononongo lubonakalisile ukuba iyeza lanceda izigulana ezalupheleyo ezazaphuke amanqindi ukufezekisa amandla emisipha kunye nokuzuza okungcono.
Phantse wonke umntu owakha umzimba uvuma indlela ukonzakala okuthile okulibazise ngayo inkqubela-phambili yakhe ngokubavalela ngaphandle kwejimini kangangeentsuku, okanye iiveki. Ukuba uqhubeka uchitha ixesha lakho kwindawo yokuzivocavoca, ukwenzakala akunakuphepheka. Kwakhona, ukwanda ngokukhawuleza kwemisipha kubangelwa ziiseshoni zoqeqesho olunzima, kunokubeka uxinzelelo olukhulu kwizicubu zakho kubandakanya amathambo akhokelela ekonzakaleni.
Uninzi lwabasebenzisi bayavuma ukuba mk677 ibancede ukuba khawulezisa ukulahleka kwamafutha. Iziphumo zokulahleka kwe-Mk 677 zichazwe ukuba ziyamangalisa mhlawumbi kuba i-GH kuphela kwehomoni enokukunceda utshise amanqatha angaphantsi kunye ne-visceral fat ngelixa ikwenza ukuba ukhulise ubunzima bemisipha. Ngenxa yoko, i-Ibutamoren ihlala yongezwa kwiinkqubo zokuphindaphinda umzimba.
Enye inzuzo ye-mk 677 kukuba ivuselela i-ghrelin receptor kwaye inokubangela nootropic iziphumo. Ngokutsho kophando olwenziwe yi-NCBI kunokunceda ukuphucula ukusebenza kwengqondo ngokuphembelela iindlela ezimbini ngokungangqalanga. Ezi ndlela zibandakanya ukonyusa i-IGF-1 enceda ekuphuculeni ukugcinwa kwememori kunye namandla okufunda. Kwaye, ngokwandisa umgangatho kunye nobungakanani bokulala kwe-REM. Ukulala kubalulekile kuba kuqinisekisa ukusebenza kakuhle kwengqondo.
I-Mk 677 inyusa i-IGF-1, IGFBP-3, kunye nokukhula kwamanqanaba ehomoni kubantwana abanesiphene sokukhula kwehomoni ngaphandle kokuguqula ukugxila kwecortisol, insulin prolactin, glucose, thyroxine (T4), i-thyrotropin okanye i-triiodothyronine (T3).
I-Ibutamoren ibonakalise umphumo ofanayo kumadoda angenanto ye-GH, kodwa iswekile kunye ne-insulin inyukile, nayo.
Ukuba yi-Ghrelin Mimetic kuya kufuneka ulindele ukuthatha ukutya okuninzi ngelixa uphantsi kwe-Ibutamoren. Nokuba oku kuluncedo okanye kuyasilela ngokweenjongo zakho, kuyakufuneka uqonde ukuba sesinye seziphumo ezingangqubaniyo ze-mk 677.
I-Ibutamoren isebenza kakuhle ekomelezeni ukhuseleko kunye nokuba sempilweni. Amandla omzimba wakho okulwa kunye nokuhlala kude nokuphazamiseka kwamaxesha onyaka kunye ne-allergies kuphuculwe kakhulu. Uya kuqala ukuphila ubomi obutofotofo obuzele luxolo lwengqondo.
Umjikelo 1: Ukufezekisa eyona MK 677 (Ibutamoren) yomgubo, kufuneka uqale nge-10mg ngeyure ezingama-24 kwiiveki zokuqala ezili-11 zokusetyenziswa ngaphambi kokuba ungeze kwi-20-25mg ngeyure ezingama-24 kamva kwi-12th iveki. Oku kunokuthathwa njengamanzi, ngomlomo okanye nge-capsule.
Umjikelo 2: Ungaqala nge-15mg ngeyure ezingama-24 kwaye wandise ubude bomjikelo wakho weMK 677 ngaphaya kweeveki ezili-12. Ngokwenza njalo, awuzukuba nexhala malunga neengxaki zepituitary gland okanye ezinye iziphumo ebezingalindelekanga.
Umjikelo 3: Uninzi lwabakhi bomzimba abaphuma kumjikelo we-opts yokwandisa idosi ye-MK 677 ukuya kwi-50mg ngosuku kunye nokugcina ubude be-MK 677 yeeveki ezisibhozo.
Umjikelo 4: Ukuba ufuna ukwakha izihlunu, abasebenzisi bacebisa ukuthatha idosi ye-Ibutamoren ye-30mg ngeyure ezingama-24.
Umjikelo we-5: Ukuba eyona njongo yakho iphambili kukususa amanqatha, uninzi lwabasebenzisi abanamava bacebisa ukuthatha i-20mg ngeyure ezingama-24.
Umjikelo we-6: Ukuba eyona njongo iphambili kukuphilisa ukonzakala, idosi ye-MK 677 ye-10-20mg ngosuku iyacetyiswa.
Iindaba ezimnandi zezokuba awuyi kuyidinga i-PCT (iTranscycy Therapy) ye-mk 677 njengoko ingaphazamisi nayiphi na ihomoni.
Uphando lwethu kunye neengxelo ezivela kubasebenzisi abanamava zibonisa ukuba i-20mg ukuya kwi-30mg yeyona idosi ilungileyo ye-MK 677. Abanye abasebenzisi baxele ukuthatha ngaphezulu kwe-30mg ye-ibutamoren ngosuku, kodwa oku akuzange kunike ziphumo zibhetele. Ubude be-MK 677 yomjikelo bubonakalise bubaluleke ngakumbi kunedosi ye-ibutamoren.
Kuba ibutamoren iseliPhando elitsha leziyobisi, ayikavunywa yi-FDA. Nangona kunjalo, i-mk 677 iye yasetyenziswa kuvavanyo lweengcali zokwakha izakhiwo zomzimba eziya kuthi zivume ukuba ichiza likhuselekile. Kuye kwafundwa ngokubanzi ngabaososayensi abavuma ukuba ichiza liyasebenza.
Ibutamoren kutshanje uye waduma ngokumangalisayo kulwakhiwo lomzimba. Esona sizathu siphambili sokuba i-mk677 i-nutrobal isetyenziswe kakhulu kulwakhiwo lwezihlunu ngeenjongo zokunyusa amanqanaba e-GH. Wonke umntu okwakha umzimba uhlala ejonge phambili ekubeni ngoyena mntu ungoyena uphambili kunye noyena mkhulu.
Kuba iiHormone zokuKhula zibiza kakhulu azikho ezinye izisombululo ezisepokothweni zokunyusa ukukhula kwehomoni, ngaphandle kweNutrabol. UMk 677 yindlela efikelelekayo kakhulu xa kuthelekiswa nayo I-HGH (ii-Hormones Zokukhula koluntu) kwaye ingawandisa ngokukuko amanqanaba okukhula kwe-hormone yomntu ukuya kwinqanaba elikhulu.
Kukwabalulekile ukuba uyazi ukuba iNutrobal ihlala igcwele IiSARM. Umzekelo ogqibeleleyo yindibaniselwano ye-S23, MK-677, kunye I-RAD140 (Testolone) ipowder.
UJanssen I, Heymsfield SB, Wang Z, Ross R. Ubunzima bemisipha kunye nokusasazwa kwamadoda nabasetyhini abangama-468 abaneminyaka eyi-18-88 yr. J Appl Physiol. Ngo-2000; 89: 81-88
Adunsky A., Chandler J., Heyden N., Lutkiewicz J., Scott BB, Berd Y.,. . . IPapanicolaou DA (2011). I-MK-0677 (ibutamoren mesylate) yokunyanga abaguli abachacha ekwaphulweni kwenyonga: isifundo se-IIb esigcweleyo, esingenamkhethe. Oovimba abagciniweyo beGerontology kunye neGeriatrics, 53 (2), 183-189.
I-10 edume kakhulu kwi-Anabolic Steroids Raws Material Iimbono ezixhaphakileyo kwihlabathi le-anabolic steroids